Mac မှဝေးလံသော Desktop ဖြင့် Windows PC ကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲ ငါက Mac ကပါ
အဝေးမှ Desktop ကိုဘယ်လို Mac မှ Windows ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်ဆက်သွယ်ရမည်နည်း
Francisco Fernandez | | Mac က App Store ကို, လဲ tutorial
သင့်တွင် ၀ င်းဒိုး operating system ရှိသောကွန်ပျူတာရှိပြီးအဝေးမှ desktop လုပ်ဆောင်မှုသည်တက်ကြွနေလျှင်၊ Mac မှထိုကွန်ပျူတာကို ၀ င်ရောက်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိသင်စဉ်းစားမိလိမ့်မည်။ တတိယပါတီဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ဖြင့် PC ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းမပြုရန်အသုံးဝင်သည်နှင့်အခြား Windows ကွန်ပျူတာမှပြုလုပ်နိုင်သကဲ့သို့ဆက်သွယ်မှုကို Mac မှတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ဤကိစ္စတွင်၊ MacOS တွင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောကိရိယာနှင့်သင့်ကိုအထူးသဖြင့်ဤအရာကိုခွင့်ပြုနိုင်သောကိရိယာမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်မလွယ်ကူသော်လည်းအမှန်တရားမှာ၎င်းသည် မည်သည့် Mac မှမဆိုဝေးလံသော desktop connection ကိုသင်လုပ်နိုင်သည်, ဤအဘို့အသငျသညျ application တစ်ခုသာလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်၏ Microsoft ကွန်ပျူတာနှင့် Microsoft Remote Desktop ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါ
ကျနော်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဤအချိန် Microsoft ကသူတို့ရှုပ်ထွေးစေကြပြီမဟုတ် Mac မှဝေးလံခေါင်သီသော desktop ကိုအသုံးပြုလိုသောသူများအတွက်၎င်းသည်၎င်းအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖန်တီးပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်လိုသာရနိုင်သည်.
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင့် Windows ကွန်ပျူတာကို Mac ကနေချိတ်ဆက်ဖို့၊ သင်လိုအပ်မည့်ပထမ ဦး ဆုံးမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်:
အခြားကွန်ပျူတာများမှဝေးလံခေါင်သီသောဆက်သွယ်မှုများကိုခွင့်ပြုရန်အတွက် Windows PC တစ်ခု (Windows 10 ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ရန်) ။
ဆက်သွယ်ထားသောနိုင်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ IP ကို။
သင်၏ Mac ပေါ်တွင် Microsoft Remote Desktop အက်ပလီကေးရှင်း။
Microsoft က Remote Desktopအခမဲ့
သင်သည်ဤအရာကိုစုစည်းပြီးမှန်ကန်စွာမှတ်တမ်းတင်ပြီးလျှင် ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကွန်ပျူတာနဲ့အဝေးကနေဆက်သွယ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အဆင့်တွေကိုလိုက်နာရမယ်။
သင်၏ Mac မှ Remote Desktop application ကိုဖွင့်ပြီး၎င်းကိုနှိပ်ပါ အိုင်ကွန်ထည့်ပါနှင့်ရွေးပါ "Desktop" (သို့မဟုတ်စပိန်ဘာသာဖြင့် "Desk") ။ wizard သည်အလိုအလျောက်ပေါ်လာပါကသင်ဤအရာကိုပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ခေါ်လယ်ပြင်၌ "PC အမည်"လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပါ Windows ကွန်ပျူတာ IP သင်ဆက်သွယ်လိုသောမေးခွန်းသို့မဟုတ် အိမ်ရှင်နာမည် အကယ်၍ သင့်မှာကွန်ပြူတာနှစ်ခုလုံးတူညီတဲ့ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်။
ဒီပြီးပြီပြီးတာနဲ့၏လယ်ပြင်၌ "သုံးစွဲသူအကောင့်"၊ သင်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာပေါ် မူတည်၍ ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုရှိသည်။
"အချိန်တိုင်းငါ့ကိုမေးပါ" အဖြစ်ထားခဲ့ပါထို့ကြောင့်၊ သင်သည်စက်ပစ္စည်းကိုထပ်မံဝင်ရောက်လိုပါကစက်၏သုံးစွဲသူအမည်နှင့် ၄ င်း၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ရမည်။ အကယ်၍ သင် Windows PC တွင်အသုံးပြုသူများစွာရှိပါကအသုံးဝင်လျှင်သင်ဆက်သွယ်လိုသည်။ သူတို့ထဲကတစ် ဦး ချင်းစီမှအချိန်ကွဲပြားခြားနားသော။
သုံးစွဲသူအကောင့်တစ်ခုသတ်မှတ်ပါ၊ အသုံးပြုသူတစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ် ဦး ထက်ပိုသောကွန်ပျူတာများကိုသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရယူနိုင်အောင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်၊ အသုံးပြုသူအမည်သို့မဟုတ်စကားဝှက်ကိုထည့်ရန်မလိုအပ်ပေ။ အကယ်၍ သင်ဤအရာကိုစိတ်ဝင်စားပါက“ Add User Account” option ကိုရွေးပြီးသင်လိုချင်လျှင်အသုံးပြုသူအမည်၊ လျှို့ဝှက်နံပါတ်နှင့်ဘုံနာမည်တစ်ခုထည့်ပါ။
ပြီးနောက်, သင်ရုံရန်ရှိသည် "Save" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ (သို့မဟုတ်စပိန်ဘာသာတွင် "သိမ်းဆည်းပါ") နှင့်သင်ဆက်သွယ်ရန်သင်သိမ်းဆည်းထားသည့်မတူညီသောကိရိယာများနှင့်စာရင်းတစ်ခုကိုအလိုအလျောက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
သင်ပြုပြင်ပြီးသောခလုတ်ကိုနှိပ်ရုံသာဖြစ်ပြီး၊ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲအရာအားလုံးကိုပြုပြင်ပြီးဖြစ်သည် မည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိဘဲ၎င်းကိုသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါကဝင်းဒိုးကွန်ပျူတာကိုယ်နှိုက်ကဲ့သို့သုံးပါ။ ဝင်းဒိုးထဲ၌သာ။
သင်လုပ်ပြီးသည်နှင့်သင်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်တပ်ဆင်ထားသည့် ၀ င်းဒိုးဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍၊ သငျသညျ configuration ကနေ parameters တွေကိုတစ်စီးရီးကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ပြတင်းပေါက်၏အရွယ်အစားနှင့်အလိုလျောက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း (သို့) သင်၏အရည်အသွေးအပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်နိုင်သောအရာများဖြစ်သော်လည်းအရည်အသွေးအရကြည့်ရှုရန်အရာအားလုံးကိုမည်သို့နှစ်သက်သည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » အဝေးမှ Desktop ကိုဘယ်လို Mac မှ Windows ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်ဆက်သွယ်ရမည်နည်း
Francisco Jose ဟုသူကပြောသည်
Francisco Fernandez ဟုသူကပြောသည်
ဒါဟာအတော်လေးစပ်စုသည်။ ငါမြင်ခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင် cable ကိုပြnoနာမရှိသော်လည်း၊ ပရင်တာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် PC ရှိ Wi-Fi ကို အသုံးပြု၍ ပုံနှိပ်သောအခါပြproblemsနာများရှိသည်ဟုထင်ရပုံရသည်။ ဝေးလံခေါင်သီသော desktop အတွက်အချက်ပြကိုတစ်နေရာတည်းသို့ပို့သည်။ သို့သော်ဟေးငါပြောလိုသည်မှာအနာဂါတ် application သို့မဟုတ် Windows version များတွင်အဖြေထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်ကေဘယ်သို့မဟုတ်ဝိုင်ဖိုင်ပါသည့်ပရင်တာကို သုံး၍ ပုံနှိပ်။ မရပါ။
အလုပ်ခွင်စာရင်းကိုကျွန်ုပ်မရရှိပါကကျွန်ုပ်၏ mac ကိုရှာ။ မရပါ။
သင့်ကူညီမှုအတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်မိနစ် ၁၀ အတွင်းကျွန်ုပ်လုပ်ပြီးသောသင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း, ငါခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာပေမယ့်အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုရသောအခါသူကမှန်ကန်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်ငါ့ရုံးခန်း pc ချိတ်ဆက်လို့မရဘူးငါ့ကိုပြောတယ်။
Rafael Palacios ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ Mac book pro ဟောင်းတစ်ချို့ရှိတယ်၊ အဲဒီမှာလတ်တလော El Capitan OS (10.11) ကိုငါတပ်ဆင်လို့မရဘူး၊ ဒါကြောင့် Apple Store က Remote Desktop ကိုရယူဖို့နဲ့ install လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး (း ၁၀.၃) ။ ယခင်ပရိုဂရမ် (Remote Desktop 10.3) ၏မူကွဲကိုကျွန်ုပ်မရနိုင်ပါ။
Rafa Palacios ကိုပြန်ပြောပါ
ဟယ်လို! ငါ့မှာ Rafa နဲ့ထပ်တူပြproblemနာရှိနေတယ်၊ ​​ငါဝေးလံခေါင်သီတဲ့ desktop ပေါ်မှာအရင် version လိုအပ်တယ်။
ကောင်းတယ်၊ ငါ့ကိစ္စအတွက်အဲဒါကငါ့အတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါအမှားက 0x204 ကိုပေးတယ်။ ကွန်ပျူတာ၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုတောင်မတောင်းဆိုပါ။
Mar နှင့်အတူတူပဲပြ,နာ၊ ဖြေရှင်းနည်းရှိလားသိလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော့်အမှု၌လည်းအလားတူဖြစ်ပျက်သည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ပါ။ ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားသောအခါကျွန်ုပ်သည် 0x204 အမှားအယွင်းပေးသည်။ ၎င်းသည်ပစ်မှတ်ထားသည့်ကွန်ပျူတာ၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုတောင်မတောင်းဆိုပါ။
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်း! ကျွန်ုပ်၏အောက်ပါပြproblemနာရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ MIF မှ Microsoft Remote Desktop ကိုကျွန်ုပ်၏အိမ် WIFI ဆက်သွယ်မှုဖြင့်အသုံးပြုပါက၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသောသော့ချက်တစ်ခုဖြင့် Mac ပေါ်ရှိဖိုင်တွဲတစ်ခုအတွင်းရှိအရာအားလုံးကိုမည်သို့ရွေးရမည်နည်း
Mac မော်ဒယ်လ်များကိုပရိုဆက်ဆာတစ်လုံးတည်းသာ အသုံးပြု၍ ရမလား။